Umqeqeshi waphesheya uthi umdlali weChiefs ufanelwe ukudlala e-Europe | News24
Cape Town – Umqeqeshi weqembu lesizwe labaneminyaka engaphansi kwengu-20 e-Italy nowayedlalela elinye lamaqembu amakhulu emhlabeni, i-AC Milan, u-Alberigo Evani, ukholwa ukuthi umdlali odlalela iKaizer Chiefs namaMajita, uWiseman Meyiwa, ulindwe yizinto ezinkulu e-Europe.
Iqembu lesizwe lakuleli labaneminyaka engapansi kwengu-20 libhaxabulwe ngo-2-0 yi-Italy eqoqweni layo kwabe sekuwukuphuma kwalo kumqhudelwano we-U20 World Cup ngemuva kokuthatha iphuzu elilodwa nje kuphela kwi-Uruguay, kodwa noma kunjalo, u-Evani akawuvali umlomo ngoMeyiwa.
OLUNYE UDABA: UBaxter useqoke ukaputeni omusha weBafana
Le nkakha eyayidlala esiswini, eyawina inqwaba yezindondo neRossoneri kusukela ngo-1980 kwaze kwaba ngu-1993, itshele izintatheli yathi: “Unombolo 6 weNingizimu Afrika (uMeyiwa) angase adlale e-Europe ngelinye ilanga.
“Ubeyinkathazo enkulu kuthina futhi bekuyiqhinga lethu ukumvala ukuze angalitholi ibhola, okunalokho, abadlali basemuva kudingeke ukuthi baphakamise ibhola futhi bebengenalo ithalente elingako.”
Khonamanjalo, lo mdlali oneminyaka engu-17 ubudala uthi ufunde lukhulu ngokudlala ezingeni lomhlaba.
Utshele i-website wathi: “Ufunda lukhulu uma udlala nompetha njengoba kwiNdebe yoMhlaba umuntu udlala nompetha.”